Ghostwriter injineernimada warshadaha I Waxaan qorey waraaqahaaga shaqada
Ghostwriter ee injineernimada warshadaha
Qorayaashayagu waxay leeyihiin khibrada lagama maarmaanka u ah injineernimada warshadaha
Qoraalka cirfiidka tacliinta sare waxaa badanaa adeegsada ardayda arimahan. Waxaan kaa taageereynaa qoridaada shahaadada bachelor iyo shahaadada Masterka sidoo kale marka aad abuureyso Shaqada guriga, Warqad aqoon kororsi ah iyo Shaqada mashruuca waaxdaada. Wakaaladeena Papernerds waxay leedahay tiro badan oo injineero khibrad u leh qorayaasha. Adiga laftaadu waxaad ku firfircoon tahay nolosha xirfadeed (warshadaha baabuurta, injineernimada farsamada, injineernimada farsamada, injineernimada korantada, IT, iwm.) Waxaan si sharaf leh u dhihi karnaa waxaan ka caawinnay injineero badan oo warshadaha jaamacadaha ah inay ka qalin jabiyaan shahaadooyinka. Macno malahan haddey ahaan laheyd Shahaadada koowaad ee jaamacadda oder Qalin jabinta masters . Qoraallada cilmiyaysan ee wanaagsan ee ku saabsan mowduucyo kaladuwan wax dhibaato ah naguma keeneyso. Waxaan bixinaa tayo hufan waxaanan kaa caawinaynaa inaad ku guuleysato guul xirfadeed! Dabcan sidoo kale waxaan heli karnaa sida Adeegga tafatirka firfircoon. Waxaan uga jawaabnaa dhammaan weydiimaha macaamiisha iyadoo ku saleysan macaamiil gaar ah waxaanan ku siinaynaa taageero aad isugu dhow. Isku kalsoonow adeegyadayada iyo amar Shaqadaada annaga. Kadib waxaad kuheleysaa shaqsigaaga waqti aad u yar gudahood shaqada beziehungsweis in dalab!
Qorayaasheena ayaa ku faraxsan inay qoraan qoraaladaada sayniska. Qorayaashayagu waxay qoraan qoraaladaada. Shaqada tacliimeed, waa inaad kireysataa hay'addeena qorista qoraaga. Shaqadaada cilmiga ah ee sidaas ah shahaadada Masterka, Qoraalka PhD ama waxaad noogu soo qori kartaa qoraalkaaga. Si aad u hesho darajo wanaagsan, waa inaad caawimaad raadsataa. Sababtoo ah hawlo badan oo hordhac ah waa in la qabtaa si loo soo gudbiyo shaqo cilmiyaysan oo wanaagsan. Waa inaad si joogto ah uga shaqeysaa iyada oo aan lagaa dhex gelin, haddii kale waxaad si dhakhso leh uga bixi doontaa mawduuca. Ka tag cilmigaaga Shaqada guriga qor. Qoraa-yahankeenna aqoonta leh ayaa shaqada kuu qaban doona. Adeegsiga adeeggan oo kale wuxuu ku siinayaa xorriyad badan oo aad ugu diyaar garowdo maadooyinka adag. Sidoo kale waa inaad ku tiirsanaataa mid ka mid ah qorayaashayada tayada qoraalkaaga ee ku saabsan daraasaddaada tacliimeed.
Qoraalka ghost ee koorsada injineernimada warshadaha
Koorsadu hadda waa mid ka mid ah lambarrada afraad ee ugu sarreeya dhammaan koorsooyinka Jarmalka. Tani waxay muujineysaa muhiimadda weyn ee ay leedahay daraasaddan. Maalmahan shirkadaha waxaa lagu gartaa xaqiiqda ah in cilaaqaadka farsamada iyo dhaqaalaha iyo shaqooyinka ay aad isugu dhowyihiin. Badanaa maahan oo kaliya farsamo yaqaan saafi ah oo la weyddiiyo. Shaqaaluhu waa inay awoodaan inay falanqeeyaan dhibaatooyinka farsamada iyo dhaqaalaha kana soo saaraan gunaanad macno leh iyaga. Koorsada waxaa lagu bixiyaa diirado kala duwan. Meelaha ugu waaweyn ee daraasadda laga barto waa injineernimada farsamada, injineernimada korantada, tikniyoolajiyadda gawaarida, sayniska kombiyuutarka, tikniyoolajiyadda deegaanka iyo saadka / wax soo saarka.
Injineernimada warshadaha ee cilmi baarista
Labada semestar ee ugu horreeya, maadooyinka aasaasiga ah ee farsamada iyo ganacsiga ayaa la baraa, oo laga bilaabo sadarka saddexaad diiradda ayaa la saaraa. Barashada injineer warshadeed waxaa loo tixgeliyaa shahaado aad u baahan. Ardaydu waxay filayaan imtixaano aad u adag oo ka yimaada cilmiga injineernimada sida xisaabta, makaanikada farsamada, maadooyinka aasaasiga ah ee injineernimada korontada, qalabka injineernimada iyo kuwo kaloo badan. Arday ahaan, waa inaad sidoo kale bartaa maadooyinka maamulka ganacsiga sida xisaabaadka xisaabaadka iyo xisaabinta kharashka. Taasi kaliya waxay muujineysaa kakanaanta barnaamijkaaga shahaadada. Inta lagu guda jiro waxbarashadaada waxaad badiyaa heli doontaa kuwa badan Shaqada mashruuca waa inay wax ka beddelaan. Markaad dhammaystirto guul, waxaad isticmaali kartaa Gudbinta hab. Halkan, sidoo kale, waxaa jira maaddooyin badan oo kala duwan oo aad ku baari karto. Si loogu diyaar garoobo Gudbinta waxaan kaa caawin karnaa a Qeexida maqalka caawimaad.
Rajada xirfadeed ee shahaadada injineernimada warshadaha
Intaas waxaa sii dheer, sidoo kale waa inaad isku diyaarisaa imtixaanno aad u adag isla waqtigaas. Tani waa caqabad buuxda oo dad badan haysata. Taasi waa sababta aan caan ugu nahay injineerada warshadaha. Arday badan ayaan la qabsan karin culeyska weyn ee saaran. Sidaa darteed, waa inaad doorbidaa inaad nagu wareejiso qoraallada tacliinta iyo kuwa adag. Sidan ayaad ku gaadhaysaa waxqabad tacliimeed oo aad ufiican dadaal shakhsiyeed uguyar! Markaad taas ku hesho qiimo aad u cadaalad ah-waxqabad!
Rajada shaqooyinka berrinka injineernimada warshadaha
Ardayda ka qalin jabisay injineernimada warshadaha waxaa lagu yaqaanaa inay gaaraan mushaharka bilawga celceliska bilowga shaqadooda xirfadeed. Bilaabidda mushaharka ka badan € 60.000 xitaa waa suurta gal shirkadaha waaweyn. Qalinjabiyeyaasha khaaska ah ee wanaagsani waxay horeyba uheli karaan mushahar sanadle ah € 80.000 kor uqaadida sanado yar kadib. Lambarradan ayaa fududeynaya in la arko rajooyinka kaa sugaya qalin-jabinta ka dib. Mushaarka ugu fiican, howlaha xiisaha leh, saacadaha shaqada oo aad ufiican iyo masuuliyad badan. Injineerada warshadaha ayaa loo baahan yahay.
Qalinjabiyeyaasha injineernimada warshadaha oo aad ufiican waxbadan. Waxaan kaa caawinaynaa inaad noqotid injineer injineer warshad aad uwanaagsan. Iyadoo aan loo eegin haddii ay shahaadada bachelor ama hal design. Nala shaqaaleysiiya oo taageero ka hel qoraaladeena cirfiidka. Annagu haddaanu nahay Papernerds waa saaxiibkaaga wanaagsan! Ka dhaadhici naftaada awoodahayaga oo codso baaritaan aan qasab ahayn!
Hubinta tayada ee berrinka injineernimada warshadaha